2 နှစ်ပေါင်း6months ago #360 by Dariussssss
ဒီတစ်ခုဟာအလွန်ရိုးရှင်းပြီးမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြစ် ... ဒါမှမဟုတ်သင့်ပါဘူး။ ကျွန်မကြောင်းဝန်ခံတစ်ဦးအဲယားဘတ်စ်ပန်ကာမိပါတယ်။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်နဲ့ငါ့ပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင် Sims ကတည်းကထိုအကြောင်းလေယာဉ်များထုတ်လုပ်သူငါ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ FGFS, FS2004 နှင့်ယခုထဲမှာ FSXမဆိုအကောင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဲယားဘတ်စ်လေယာဉ်ခဲရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ payware လေယာဉ်တွေဟာပေမယ့်ကိုယ့်ကမတတ်နိုင်လို့မရပါဘူး။
မေးခွန်းကဒီဖြစ်ပါသည်: အဘယ်အရာသည်အခြားနှစ်ဦးကိုဆင်းမ်များအကြောင်းကို,X-Plane နှင့် P3Dမဆိုအပြည့်အဝအလုပ်မလုပ်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအဲယားဘတ်စ်ကသူတို့ကိုမဆိုဘို့ရှိသလော
အတွက်အဲယားဘတ်စ်လေယာဉ်, အထူးသသောမတ်စ်ရုသသည် A330 / 340 နဲ့ PA A380 နှင့်အတူငါရှိအဓိကပြဿနာ FSX PFD တဦးတည်းရိုးရှင်းတဲ့အရာကင်းမဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ို့နှငျ့ဆကျတိပ် overspeed နှင့်တင်းကုပ်နှစ်ဦးစလုံးဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ, ထိုလေယာဉ်ပျံကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကပိုများမပေးပါ။ စနစ်တကျကြောင့်ပျံသန်းဖို့အဘယ်သူမျှမလမ်း။ လကြာငါတစ်ခုလုံးကိုအတွက်ကြောင့်အချို့အကူအညီနဲ့သော်လည်းအဘယ်သူမျှရဖို့ကြိုးစားနေတာ FSX အသိုင်းအဝိုင်းငါ့ကိုကူညီပေးဖို့လိုသည်။
ဤနေရာတွင် Rikoooo မှာရရှိနိုင် A320 Multi-livery ဗူး, အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီး, ငါလိုခငျြအပေါငျးတို့သဖော်ပြခဲ့တဲ့လေယာဉ်တစ် PFD ကဲ့သို့သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး TR A330 ဖို့, အခြို့သောအရာတို့ကိုလွှဲပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုနေရာတိုင်းကိုမေးမြန်း ... ့ငါ့အချိန်ဖြုန်း။
နောက်ကျော FGFS မှ Going တကယ်ငါ၏အနောက်ဆုံး option ကိုသော်လည်းအဘယ်သူမျှမကအခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်လျှင်ငါဝမ်းမြောက်စွာပြုမည်။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #367 by Gh0stRider203
ဒါဟာဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ်ရဲ့ IF, သင်သည်ထို fix ဖို့ aircraft.cfg file ကို edit နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါအမှန်တကယ် CLS, DC-10-30F နဲ့လုပ်ဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကလောင်စာဆီ 4.5K ဂါလန်အကြောင်းသင့် shorted နှင့်ကောင်းစွာကြောင့်အမှန်တကယ်ဘာအောက်ကစုစုပေါင်း max ကိုအလေးချိန်လျှော့ချ။
စုံတွဲ aircraft.cfg ဖိုင်အပြောင်းအလဲနှင့်အဲဒါကိုဖြစ်သင့်ပုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုငါ max ကို-range ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်အဘယ်သူမျှမပြဿနာပျံသန်းနိုင်သည်
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #369 by Dariussssss
ရိုးရှင်းစွာအ ... 120 kts ကြောင့်ဖေါ်ပြခြင်းနှင့်, cfg ဖိုင်ထဲမှာ, တင်းကုပ်မြန်နှုန်းလုံးဝ Unreal ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လော ရုံ YT မှာတချို့ယာဉ်ဆင်းသက်သောဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနှင့်သင် 155 မှာ ... သင်သတင်းအတွက်တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, 160 နှင့် 120 အကြားအမှန်တကယ်ဖွင့်သိမြင်ပါလိမ့်မယ်။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #371 by Gh0stRider203
ငါဂုဏ်နကျွန်မရဲ့ Dash-8 ရဲ့ cfg ဖိုင်မှာကြည့်ရှိခြင်းနှင့် sucker ငါတောင်မှကြောင်း sucker အပေါ် max ကိုအကွာအဝေးနီးစပ်လာပြီမဟုတ်ပါဘူးနှင့်အတိအကျမဆိုကူညီခြင်းမဟုတ်ရဲ့ညာဘက် cuz setup ကိုကြောင်းသေချာအောင်ခံရတော့အရမ်းရယ်ရတယ်
ကျနော်တို့ပျံသန်းသည့်အခါအပေါ်န့်အသတ်လောင်စာရှိသည်နှင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်လေထုအပေါ်သို့လန်ဒီသိတယ်ဖြစ်ပါတယ် refueling လို့မရပါဘူး။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #372 by Dariussssss
လေယာဉ် developer များ s ကို ... ဆကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ကြသည် ....
2 နှစ်ပေါင်း6months ago -2နှစ်ပေါင်း6months ago #373 by Gh0stRider203
ya ကလူပျံသန်းမှု Sim ဤလေယာဉ်လုပ်သည့်အခါသူတို့အမှန်တကယ် ya ကိုသိပထမဦးဆုံးအခြို့သော f'in '' သုတေသနပြုပါလျှင် Nice ဖြစ်င့်ကိုသိ ???? > ။ >
ငါ Concorde အတွက် Mach2မှာမိုဃ်းကောင်းကင်၌အချို့သောတွင်းကိုမီးရှို့သွားပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ NO ကတိငါအရမ်းရယ်ရတယ်လမ်းတစ်လျှောက်အနည်းငယ်တာဝါတိုင် Buzz မည်မဟုတ်
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်:2နှစ်ပေါင်း6months ago နေဖြင့် Gh0stRider203.
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #386 by Dariussssss
ငါအဲဒီ developer များအဘို့, ကိုယ့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကလေယာဉ်မှူးစကားပြောဖို့လုံလောက်တဲ့လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ငါ၏အ A340 PFD ပြဿနာများအကြောင်း ... ကောင်းစွာကြောင့်လေယာဉ် .cfg ဖိုင်ထဲမှာတချို့တန်ဖိုးများပြောင်းလဲပစ်ရန်လွယ်ကူပေမယ့်ဘာမျှပြောင်းလဲစေပါသည်။ အဆိုပါ PFD overspeed နှင့်တင်းကုပ်နှစ်ဦးစလုံးဖေါ်ပြခြင်းခြင်းမရှိပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မညာဘက်ခဲ့ပုံပါဘဲ။ ဒါကတစ်နေရာရာမှာ VC ကိုသို့မဟုတ် panel ကဖိုင်တွေထဲမှာပြောင်းလဲသင့်တယ်ငါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်မျှသဲလွန်စရှိသည်။
ငါတကယ် installed FGFS နှင့် A346 ... ပင်ပိုမိုဆိုးရွားစိတ်ပျက်စရာပင်ဒါကြောင့်နောက်ကျောမှ, ရှိကမစတင်နိုင်ပါအကြောင်း, ဤအကြောင်းကြောင့်ဤမျှရူးသွပ်ခဲ့ FSX နှင့် PFD fix ဖို့ရုန်းကန်။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #387 by Colonelwing
ရုန်းကန် ,, စိတ်ပျက်စရာအခိုက်အနေဖြင့် ,,, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကြောင်းအပြုသဘောအရာ ,,, ကိုသင်လေ့လာသင်ယူနေကြသည်ရှိသေး၏။
၎င်း၏ယခုဘဝ၌လေ့လာသင်ယူရန်အစဉ်အမြဲလွယ်ကူပါတယ် ,, ငါသဘောတူ ,, ဒါပေမယ့်ငှားရမ်းမှာသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ခဲယဉ်းကြိုးစားမဟုတ်
နှင့်လာမယ့် succesful ယခုအချိန်တွင်ရန်လမ်းကြောင်းဦးတည်ချက်ဖြစ်ပါတယ် ...
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #389 by Dariussssss
ဟေ့ Colonelwing, အဘယျသို့တက်လား
ကောင်းပြီ, ငါနှင့်အတူအအနည်းဆုံးမဟုတ် Air ကို Sims နဲ့လမ်းအလုပ်လုပ်ဘူး။ တစ်ခုခုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး အကယ်. ကအမှိုက်ပုံးသို့တိုက်ရိုက်တတ်၏။ ပေါ်မှာမဆိုအချိန်နှင့်အာရုံကြောဖြုန်းချင်ကြပါဘူး။
စစ်မှန်သောအသက်တာ၌, ငါ၏ဘဝတစျခုလုံးဟာရုန်းကန်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အခြားပုံပြင်မဟုတ်, ဤအရပျအတှကျအဖွင့်စေသဘောတူသည်။
2 နှစ်ပေါင်း6months ago #392 by Gh0stRider203
ကောင်းစွာ, သင်အမှန်တကယ်ပြုပါရန်ရှိသည်အားလုံးကလေယာဉ်တင်အင်ဖိုမှကြွလာသောအခါရိုးသားစွာ ... အနည်းဆုံးအားစီးပွားဖြစ်အဘို့, ဝီကီပီးဒီးယားကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။